Isisu se-Breaststroke sisigxina esiyingqayizivele, esidinga ukungaqhelekanga kwindlela yokuhamba ngokudibanisa amandla athile. Umzekelo, ukukhulula, ukubuyela kunye nokubhabhisa kusetyenziswe amaninzi epaleni ukujikeleza kwangaphakathi, amandla angundoqo, kunye namandla omlenze. Nangona kunjalo, isifuba sidinga intlobo ephezulu ye-hip ye-motion kunye ne-groin amandla. Nangona kukho ukufana okufanayo kwaye oku kwahlukana kunokuvakala ukuhamba, kodwa ezi ntlukwano zifuna ingqalelo.
Njengoko kubhaliwe ngaphambili, i-leg drive igxininisa ukunyuka kwesisu. Oku kwenza iimfuno ezikhethekileyo zokubhukuda kwebele. Ngexesha lokuqhaqha isifuba, imilenze iya kula ma nqanaba alandelayo, ebhalwe nguMat Leubbers kwisiqwenga sakhe Fundisa Yakho Indlela Yokugubha I-Breaststroke :
Ukubethelwa kwesifuba kufana nesigqabi ukukhahlela, kodwa akunjalo ngokufanayo - abantu abanalo imilenze efanayo neyegrog! Qala kwindawo yepensela, uze ufike ezinyaweni zakho ukuya ngasekupheleni kwakho. Emva koko, gxininisa iinyawo zakho- izithende ngokubhekelana nomnye nomnye, iinzwane ezibhekiselele kumacala kwaye, ukuba unesimo esaneleyo, iinzwane ezibhekiselele phantsi. Ufuna ukuguqula iinyawo zakho ukuze ujikelele emanzini nge-instep yakho okanye ecaleni lonyawo lwakho, ukusuka kwidonsi yakho enkulu ukuya kwisithende sakho. Ngoku phaya iinyawo zakho kunye nemilenze kwipateni yecyhula, uphakamise amanzi ngasemva njengoko imilenze yakho ikhula kwaye iinyawo zakho zihamba, ziphinde zihlangane kwakhona njengoko imilenze yakho yandisa ngokubanzi. Ekugqibeleni, buyela kwisithuba sepenseli ngokucoca imilenze kunye neenyawo kunye, imilenze ivuliwe ngokupheleleyo, iinzwane ziboniswe. Esi sihlandlo sokukhatyelwa kwesifuba esisodwa. Ipensela - Ukugqibela-ekupheleni kweenyawo zeFlex - Isangqa - Ipensela.
Nazi iindlela ezi-4 zokuphucula ukukhatywa kwesifuba sakho:
Qinisa i-Groin yakho!
Izihlunu ze-groin ziyimisipha eyahlukileyo ephantsi kokusetyenziswa kwamanye amanxeba okubhukuda. Nangona kunjalo, izihlunu ze-groin zibonelela ngokukhawuleza kwe-stroke kick. Ukuba ufuna ukuphucula kwiimisipha ze-groin, zama ukwenza umsebenzi we-bunkie ukubandakanya ingundoqo kunye nokuvuselela izihlunu ze-groin. Ukuba awukwazi ukwenza i-bunkie, qhelisa ukucoca ibhola phakathi kwemilenze yakho ukuze usebenzise umgangatho olula.
Ukuphucula i-Hip Internal Rotation Range of Motion
URebcca Soni waseUnited States ukhuphisana kwi-Women's 200m yokugcina isisu sokugqibela ngomhla weshumi kwi-10 ye-FINA World Championship. Clive Rose / Getty Izithombe
Eninzi uluhlu lokunyuswa kwemilenze ukuba ihambe, inkulu enkulu yokusebenza kwemveliso. Ngako oko, ukuba neendawo ezaneleyo zokunyakaza, ngokukhawuleza ukuguqula ukujikelezwa kwangaphakathi, kuvumela uluhlu olukhulu lokunyanzelwa kwemichilo. Kuluhlu olukhulu lokunyakaza, zama ukwenza ezinye izinto zokuzikhupha ezikhungweni ze-hip, ngokukhethekileyo i-fasciae latae (TFL). Enye inketho kukuqinisa izikhwepha ngokusebenzisa lolu luhlu olukhulu lokunyakaza.
Ukuphucula i-Groin Range of Motion
UJessica Hardy wase-USA unomncintiswano kwi-Women's 50m Breaststroke ukushisa ngexesha le-9 ye-FINA World Championship (25m) kwi-MEN Arena ngo-Apreli 9, 2008 eManchester England. Alex Livesey / Getty Izithombe
Nangona abathunywa bezilwanyana ezinqamlekileyo zokubhukuda abadluli kwixabiso eliphezulu lokunyuka kwintlambo, kubakho ukuhamba kweendleko ezifunekayo. Ngoko ke, ukwenza i-tissue mobilizations ye-groin nge-foam roll yindlela efanelekileyo yokunciphisa ingozi yokulimala. Enye inqubo yokuphucula uluhlu lwezityalo ezihambayo kukuqinisa intlawulo ngolu hlobo lwezithuthi, njengokwenza i- squat split squat .
Caitlin Leverenz, ngo-2007 IC Nationals. Nick Laham / Getty Izithombe
Ukugqiba umlenze wecala kunye ne-butt squeeze kubangela ukugqiba okuqinileyo ukukhaba kwaye ubuyisele umzimba ukuba uhlalutye. Njengoko ugqiba ukukhaba kwakho, iqhosha eliqinileyo le-glute, lizisa imilenze ehlangene kunye (ngokujikeleza ngaphandle kweminqweno), kunye nokuhlenga umzimba.
Ezi zixhobo zikunika ithuba lokwandisa ukukhaba kwakho kwaye ube ngumhambi wokuhamba. Ngoku, sebenzisa izixhobo ngokuhlakanipha kwaye ube ngumbelethi ongcono wokubhukuda! Ukuhlaziywa nguDkt John Mullen ngo-Apreli 26, 2016
Indlela yokususa izilwanyana kwiPlasti Swimming Pool
Ukujongana neengxaki ze-No Spark Problem kwi-Honda Accord
Ukuhlala Inkcazo (iKhemistry)
Udwebo kwi-Big Canvas
Izipho Zomoya: Ingqiqo